घर बनाउँदा कस्तो छड रोज्ने? किन्दा हेर्नैपर्ने कुरा के-के हुन्? :: Setopati
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, फागुन ६
आवासीय घर बनाउँदा छडको सही छनोट कसरी गर्ने त?
यसबारे हामीले बिल्ड इनोभेसनका निर्देशक तथा बिल्डिङ विशेषज्ञ इञ्जिनियर सुवास अधिकारीसँग जानकारी लिएका छौं। उनका अनुसार छड किन्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा ग्रेड र गुणस्तर हो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ६, २०७७, १३:२८:००